Android နှင့် iPhone 🥇 Emulator.online ▷ for အတွက်ဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံး application များ
Android နှင့် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးဆလိုက်ရှိုးပြုလုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ
ဖန်တီးရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ slides မည်သူမဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး ကဲ့သို့သူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုအထူးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အား "အများပြည်သူ" နှင့်မျှဝေခြင်းကဲ့သို့ခံစားနိုင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ပိုမိုလိုအပ်လာကြသည်။
la အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးအစား: ဆားထည့်သင့်တဲ့ app တိုင်းဟာအရည်အသွေးကောင်းတွေပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကအရူးဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးဖို့လုံလောက်နိုင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
la အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် command များနှင့် toolbar များသည်အလိုလိုသိရမည်။
la လွယ်ကူစွာမျှဝေနိုင်သည်: မျှဝေရန်ရွေးချယ်စရာများကိုလက်လှမ်းမီနိုင်ရပါမည်။
ဤဆောင်းပါး၌၊ မိမိတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ ကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ဆလိုက်ရှိုးအပလီကေးရှင်းများနှင့်သူတို့၏ကံကြမ္မာကိုကြိုးစားလိုသူအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်းပါးကိုပိုင်းခြားပါမည် အပိုင်းသုံးပိုင်းအသုံးပြုသူများကိုသီးသန့်ရည်စူးပြီးတစ်ခု အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုသူများကိုသီးသန့်ရည်စူးပြီးတစ်ခု iPhone ကို နှင့်ရှိပြီးသားဆလိုက်ရှိုး applications များထံအပ်နှံတစ်ခု နှစ် ဦး စလုံး ဗားရှင်း
အဖတ်ကိုလည်း: ဗွီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုတည်းဖြတ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်း ၃၀ (Android နှင့် iPhone)
က) Photo FX Live Wallpaper:
ဒေါင်းလုပ် (၁၃) သန်းကျော်နှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဓာတ်ပုံများတင်ခြင်း၊ ဆလိုက်ရှိုးများဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ကာတွန်းပေါင်းထည့်ခြင်း၊ အရောင်များ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်များစွာရှိသည်။ Photo FX Live Wallpaper ၎င်းတွင်ထူးခြားသောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်နောက်ခံများဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလွန်အလိုလိုသိပြီးအတွေ့အကြုံနည်းသောသူများအတွက်ပင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
အားနည်းချက်များတွင် application လည်ပတ်နေသောကင်မရာကိုမဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ ဖိုလ်ဒါများစွာဖွင့်သည့်အခါပြိုကျခြင်းနှင့်အော်တိုဓာတ်ပုံလှည့်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဤ application သည်အလိုအလျောက် interface နှင့်အဆင့်မြင့် tool များ၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးဆလိုက်ရှိုးဖန်တီးမှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ စစ်ထုတ်ခြင်းများနှင့်ဘောင်များအမြောက်အများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်၊ ၎င်းသည်လက်တွေ့ကျသောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဖိုလ်ဒါများတွင်ပြခန်းတွင်ပါရှိသောကလစ်များထည့်ခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးရှိဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးရန်လွယ်ကူစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သိမ်းဆည်းထားသောဗွီဒီယိုများကိုဝေမျှရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ပုံရိပ်အရည်အသွေးသည်ရွေးချယ်ထားသည့်အဆင့်နှင့်အညီပြောင်းလဲသည်။
C)PIXGRAM - တေးဂီတဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုး:
ဤဆလိုက်ရှိုးထုတ်လုပ်သူအက်ပလီကေးရှင်းသည်မည်သူမဆိုဓာတ်ပုံများတင်ရန်၊ သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောတေးဂီတကိုရွေးချယ်ရန်၊ စစ်ထုတ်ရန်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထည့်ရန်၊ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆလိုက်ရှိုးကိုဖန်တီးရန်နှင့်ကမ္ဘာသို့မျှဝေရန်လွယ်ကူစေသည်။
Pixgram ဆလိုက်ရှိုးများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်တေးဂီတကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်သည်။
တင်ဆက်သူဖန်တီးသူ ၎င်းသည်ယခင်အချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့် application များ၏ကျော်ကြားမှုကိုမနှစ်သက်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးရာတွင်အစပြုသူများအတွက်အလွန်ထူးခြားသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုပေးထားသည်။ ဆုံးဖြတ်ရလွယ်ကူသော interface တစ်ခုကြောင့်ဓာတ်ပုံများ upload လုပ်ရန်၊ ရှာဖွေရန်၊ ပြန်ဖွင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျပန်းနှင့်အများကြီးပို။ အလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံအသစ်ပြောင်းခြင်းအတွက်ဝစ်ဂျက်တစ်ခုရှိပြီးသင့်အားအသစ်များထပ်ထည့်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျယ်ပြန့်မျက်နှာပြင်အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့် crash မှလေ့နှင့်တူညီသောအမျိုးအစားအတွက် apps များကမ်းလှမ်းချက်ကိုအင်္ဂါရပ်များရှိသည်မဟုတ်။
နေ့ဘောင် အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွမ်းကျင်သူအယ်ဒီတာများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးသုံးစွဲသူများအားထူးခြားကောင်းမွန်သောစိတ်ကြိုက်မီနူးနှင့်အပြန်အလှန်စီစဉ်ထားသည့်အပြင်အဆင်များပါ ၀ င်သည့် feature-rich package ကိုပေးသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးနိမ့်ဆလိုက်ရှိုးတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသုံးပြီး၊
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Dayframe သည်အသုံးပြုနေသောစက်၏ဘက်ထရီကိုအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဖြုန်းတီးလေ့ရှိပြီးအစပြုသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
PicPlayPost ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တေးဂီတများနှင့် GIF များကိုအလွယ်တကူစုစည်းနိုင်သည့်အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်သည့် application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယင်း၏လူကြိုက်အများဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်ပြီးဗွီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။
PicPlayPost ၎င်းတွင်အတော်လေးအလိုလိုသိသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီးသင့်အားဓာတ်ပုံ ၉ ခုအထိထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ GIF ကို ပရောဂျက်တစ်ခုစီအတွက်ဗီဒီယိုများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရွေးချယ်မှုကောင်းများဖြင့်၎င်းတို့ကိုပိုမိုစွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။
SlideLab အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောသို့မဟုတ်ထုံးစံတေးဂီတကိုထည့်ခြင်းဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဓါတ်ပုံများကိုဗွီဒီယိုများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဖန်တီးထားသောဆလိုက်ရှိုးများသည်မိုဘိုင်းကိရိယာတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ သူတို့၏မူလအရွယ်အစားကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့မျှဝေလိုသည့်လူမှုကွန်ယက်မှလိုအပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောလူမှုရေးပရိုဖိုင်းများတွင်မျှဝေနိုင်သည်။ သင်၏ပုံသည်သင်၏ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောစစ်ထုတ်ကိရိယာများကိုလည်းဤအပလီကေးရှင်းကကမ်းလှမ်းသည်။
တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက် SlideLab ဂီတကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ iTunes က မျှဝေဖို့ Facebook က O Instagram ကို။ ၎င်းသည်ထူးခြားသော application တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
တင်ပြဒါရိုက်တာ ခွင့်ပြုiPhone ကို / အိုင်ပက် ကိရိယာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဓါတ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ ဆလိုက်ရှိုးများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်လာရန်။ ကမ်းလှမ်းထားသောဆိုးကျိုးများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအထူးသဖြင့် application သည်သင်ဆလိုက်ရှိုးများသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် HD မျက်နှာပြင်အပြည့်တောင်မှပါ။ ထို့အပြင် application သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဆလိုက်ရှိုးများကိုအခက်အခဲမရှိမျှဝေပေးသည်။
တင်ပြဒါရိုက်တာ ၎င်းတွင်အလွန်ရိုးရှင်းသော၊ အလိုလိုသိသောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူရှိပြီးသင့်အားဂီတဗီဒီယိုများလည်းဖန်တီးနိုင်သည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, အပြောင်းအလဲနဲ့မြန်နှုန်း၏မှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်အန္တရာယ်နိုင်ပါတယ်iPhone ကို။ သို့သော်ဤသည်မှာပွဲတစ်ပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးဆလိုက်ရှိုးပြုလုပ်သူဖြစ်နိုင်သည် iOS ကို.
Picflow ၎င်းတွင်အခြားအက်ပ်များပေးသည့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ဆလိုက်ရှိုးများပြုလုပ်ရာတွင်စီမံရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည့်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအက်ပ်သည်သင်တင်ထားသောဓာတ်ပုံတစ်ခုစီ၏ပြန်ဖွင့်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုပြီးထို့နောက်သင်ရွေးချယ်ထားသည့်နောက်ခံတေးသီချင်းဖြင့် scroll လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။iPod ကို.
PicFlowမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ၊ ၎င်းသည် Facebook သို့မဟုတ် Instagram တွင်မျှဝေရန်၊ ပုံများကို slide and pinch function ဖြင့်ဖြတ်တောက်ရန်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်အသွင်ကူးပြောင်းမှု ၁၈ ခုအနက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်တက်ကြွ။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားသောတင်ဆက်မှုများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အခမဲ့ဗားရှင်းမှာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိနေပြီးဗီဒီယို encoding သည်နောက်ထပ်မသွားနိုင်ပါ 30 FPS.
iMovie ၎င်းသည်ဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးရာတွင်အကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်ကိုပေးထားသည် iPhone ကို။ ဒီအပလီကေးရှင်းသည်သင်ဖန်တီးထားသောကလစ်တစ်ခုစီ၏အသံကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုပြီးရုပ်ရှင်အခင်းအကျင်းများ၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၊ ဤအကြောင်းများကြောင့်သုံးစွဲသူများစွာသည်အခြား application များကိုလျစ်လျူရှုပြီးဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များအားလုံးအတွက် iMovie ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်း iPhone ကို ၎င်းသည်ဆလိုက်ရှိုးများဖန်တီးရာတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လျှောက်လွှာအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်နှင့်အစပြုသူကိုင်တွယ်ရန်အတော်လေးခက်ခဲသည်မဟုတ်။
အဖတ်ကိုလည်း: ကွန်ပျူတာမှဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုးကဲ့သို့ဓာတ်ပုံဗွီဒီယိုများ၊ တေးဂီတများကိုဖန်တီးပါ
Android နှင့် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးဆလိုက်ရှိုးအက်ပ်များ
ကိရိယာနှစ်ခုလုံးအတွက်ရနိုင်သည် အန်းဒရွိုက် အဘို့အ iPhone ကို , VivaVideo သင် အသုံးပြု၍ အခမဲ့ရယူနိုင်သောအခြေခံဗားရှင်းရှိသည်။ သင့်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နေစဉ်တစ်ခုမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည် "pro mode" သာ။ ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်နှင့် "အစာရှောင်ခြင်းနည်းလမ်း" ပိုမြန်ပြီးပိုအလိုအလျောက်ဗားရှင်းသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းရှိကင်မရာသည်အထူးပြုလုပ်ချက် ၆၀ ကျော်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်ရိုက်ကူးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက်သင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၊ အသံဖမ်းခြင်းများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီယိုကိုပင် ထပ်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ဗွီဒီယိုများပေါ်တွင်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ရေစာအမှတ်အသား၊ ကြော်ငြာများစွာနှင့်ငါးမိနစ်ဆလိုက်ရှိုးကန့်သတ်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ဤစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်သင်သည် pro version ကိုဝယ်ယူရမည် $ 2,99,3.
အသုံးပြုသူနှစ် ဦး လုံးအတွက်ပါ အန်းဒရွိုက် အသုံးပြုသူနှစ် ဦး စလုံးသည် iPhone ကို ဆလိုက်ရှိုးများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ပိုမိုသောအရာများကိုတည်းဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ Movavi ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ဗွီဒီယိုနှင့်အသံတည်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်သောအတွေ့အကြုံအပြင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပါထည့်သွင်းနိုင်ပြီးဗွီဒီယိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အသံကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်သင်၏စက်ပေါ်ရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖမ်းယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖန်သားပြင်မှတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်စာတန်းထိုးများဖန်တီးနိုင်သည့်အခြားထူးခြားသည့်စွမ်းဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။ Movavi ၎င်းသည်လခပေးသောဗားရှင်းတွင်တည်ရှိပြီးအဘယ်သူ၏ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည် prima ထွက်သွားပါ $ 59,95။ အချို့သောသုံးစွဲသူများသည်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုမရှိလျှင်အသုံးပြုရန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဒါဟာနှစ် ဦး စလုံးအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် အန်းဒရွိုက် အဘို့အ iOS ကို ထို့အပြင်၎င်းသည် Instagram newsfeed အတွက်တင်ဆက်မှုများကိုဖန်တီးရန်ကောင်းမွန်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ယနေ့အထိ, ကများအတွက်စံပြသောပုံတူအမျိုးအစား option ကိုရှိပါတယ် Instagram ကို နှင့် IGTV။ ဒီအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းသည်စတုရန်းပုံဆလိုက်ရှိုးကိုစက္ကန့် ၃၀ နှင့်ဒေါင်လိုက်ဓာတ်ပုံဆလိုက်ရှိုး ၁၁ စက္ကန့်အထိကန့်သတ်ထားသည်။
အလုံးစုံ, MoShow ၎င်းသည် Pro ဗားရှင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာ MoShow ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံး $ 5,99 တစ်လသို့မဟုတ် $ 35,99 တစ်နှစ်။
အဖတ်ကိုလည်း: ဓာတ်ပုံများနှင့်တေးဂီတဗွီဒီယိုများမှပုံပြင်များဖန်တီးရန်အက်ပလီကေးရှင်း (Android - iPhone)
အုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူ virtual ပါတီတစ်ခုကိုစီစဉ်ပါ
Windows 10 တွင် Tile၊ Stacked သို့မဟုတ် Stacked windows များ
စမတ်နာရီများမှသီချင်းများကိုမည်သို့နားထောင်မည်နည်း (Android, Apple နှင့်အခြား)
TV ကို standby mode ထဲမွာဘယ်လိုထုတ်မလဲ
အကောင်းဆုံး Android 11 အင်္ဂါရပ်များ - မည်သည့်ဖုန်းတွင်မဆို၎င်းတို့မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း
ဘယ်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ 4G LTE တွင်အမြန်ဆုံးအင်တာနက်ရှိသနည်း။
ပုံသေဘရောက်ဇာကို iPhone ပေါ်တွင်မည်သို့ထားရမည်နည်း